မငျးသမီးကွီး မို့မို့မွငျ့အောငျတောငျ ရငျထဲ ဆို့နငျ့တဲ့အထိ ခံစားသှားရတဲ့ မိုးအောငျရငျရဲ့ စကားတဈခှနျး – Online News Post
မငျးသမီးကွီး မို့မို့မွငျ့အောငျတောငျ ရငျထဲ ဆို့နငျ့တဲ့အထိ ခံစားသှားရတဲ့ မိုးအောငျရငျရဲ့ စကားတဈခှနျး
အနုပညာ ဝမျးစာ ပွညျ့ဝတဲ့ မငျးသမီးကွီး ပီပီ ပရိသတျ တှရေဲ့ အခဈြတှကေို သာမက အနုပညာလောကရဲ့ နောကျမြိုးဆကျတှရေဲ့ အခဈြတှကေို လကျခံရရှိ ထားပွီး အမေ မှေးလို့ ခဈြစနိုး ချေါကွတဲ့ အကယျဒမီ မြားရှငျ မို့မို့မွငျ့အောငျ က တော့ မိုးအောငျရငျ ရဲ့ စကား တဈခှနျးကွောငျ့ ရငျထဲ ဆို့နငျ့ အောငျ ခံစားရ တယျလို့ ဆို ထားပါ တယျ ။ မိခငျ ဆုံးပါးသှားပွီးနောကျ စိတျပနျး လူပနျးဖွဈ နပွေီး ကိုဗဈကွားမှာ ရိုကျကူးရေး တှကွေားလုံးပမျးနေ ခြိနျမှာ သားတဈယောကျ လို ခဈြခငျ ရတဲ့ မိုးအောငျရငျ တဈယောကျ အသုတျ လာပို့ရာကနေ သားဖွဈသူ အသုတျ လိုကျရောငျးနတေဲ့ အတှကျ ရငျထဲ မကောငျးကွောငျးနဲ့ သားရဲ့ စကားကွောငျ့ရငျထဲဆို့ ရပုံကို အခုလိုပဲ ရေးသား ထား ခဲ့တာပဲဖွဈ ပါတယျ ။
” ခဈြခငျ လေးစားတနျဖိုးထား ရပါသော ပရိသတျကွီး နှငျ့ We Love သဲသဲတုနျလေး တို့ရှငျ့ မို့ Line ပျေါ မတကျတာကွာတော့ လှမျးနကွေရောပေါ့ ဒီဇငျဘာလ လောကျ က အံသှားနုတျ ထားရတယျ ပိုးသတျဆေးတှသေောကျတော့ နုံးခြိနတောပဲ ပွီးတော့ကနျြးမာရေး စဈဆေးမှုယူပွီး MRTV-4 က ခဈြလှစှာသော ဇာတျလမျးတှဲကို ပွနျလညျ ရိုကျကူး နပေါသညျ။” ” မိခငျကလညျးဆုံး သှားကလညျး နုတျထားလို့ အားလြှော့နပွေီး Covid ကိုကွောကျရတာ တဈမြိုး စိတျအငျအား ခြိနဲ့စှာနဲ့ပဲ ရှူတငျကို သှားရ ပါတယျ။ ရှူတငျရောကျတော့လညျး အနုပညာရဲ့ ကုစားမှုကွောငျ့ သရုပျဆောငျမှု ပညာကမနသောပါဘူး အားလုံးအဆငျပွပေါတယျ။ဒီနေ့ တနင်ျဂနှေ နားရကျ ဆို တော့ အိမျမှာနားနတေုနျး သားသား Moe Aung Yin က ဖုနျးဆကျလာတယျ ”
“သားသား အသုပျ လာပို့ခငျြ လို့တဲ့ ( ပွီးခဲ့တဲ့ သုံးလေးရကျ က ဂဏနျး တှေ ပုဇှနျတှေ အမြားကွီး လာပို့ ထားသေးတယျ ) သူကပွောတယျ သားအသုပျ လိုကျရောငျးနေ တယျ ရုတျတရကျ ဒီစကားကွား ရတော့ မို့ ရငျထဲမှာ ဆို့သှားတယျ ။ မိခငျတဈယောကျ အနနေဲ့ ကိုယျ့သားလေး ကို ဒီလို ဘယျရောငျး စခေငျြပါ့မလဲ ။ မို့က မေးလိုကျ တယျ သားလေး ကားနဲ့လိုကျ ရောငျးတာ မွတျရောမွတျ ရဲ့လား သူကပွော တယျ အမမှေေးရယျ ဘယျမွတျ ပါ့မလဲ မရှုံးရငျပွီးရော အမေ မှေး သားပရိတျသတျ နဲ့ ထိတှေ့ နခေငျြတယျ ။ ( အျော … အမတေူ သားပါလား ) ”
“သူ က Moe’s Favorite Food ဆိုပွီး အသုပျ စုံ ၊ ကွကျကငျနှငျ့ ဆနျလုံးညို အုနျးထမငျး ၊ ဆိတျကငျ နှငျ့ ဆနျလုံးညို ပဲထမငျး တှရေောငျး နပေါတယျ မို့သားလေး ကို အားပေး ကွပါ ။သူကိုယျ တိုငျ လိုကျပို့ပေး တာပါ စားစရာမှာရငျမငျးသားလေးနဲ့ လညျး ဓါတျပုံအတူ တှဲရိုကျလို့ ရတာပေါ့ ။ Covid ကာလမှာ ခန်ဓာ ကိုယျ ဝမှာကွောကျတဲ့ သူတှေ အတှကျ ဆနျလုံး ညို စားဖွဈ အောငျ သူက စီစဉျ တာပါ ။ သားသား ရောငျး ရပါစေ ။” လို့ ရေးသား ပွီး ပရိသတျနဲ့ ထိတှနေ့ရေတာကို ကွိုကျတဲ့ အမတေူ သားဖွဈသူ မိုးအောငျရငျ ရဲ့ Moe’s Favourite Food အကွောငျးလေး ကို ပရိသတျကို မြှဝပေေးရငျး သူ့ရငျထဲက ခံစားခကျြလေးကို ပွောပွ ခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ … .
crd : Shwe Yaung Myanmar ( Writer : LLA )
အနုပညာ ဝမ်းစာ ပြည့်ဝတဲ့ မင်းသမီးကြီး ပီပီ ပရိသတ် တွေရဲ့ အချစ်တွေကို သာမက အနုပညာလောကရဲ့ နောက်မျိုးဆက်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို လက်ခံရရှိ ထားပြီး အမေ မွှေးလို့ ချစ်စနိုး ခေါ်ကြတဲ့ အကယ်ဒမီ များရှင် မို့မို့မြင့်အောင် က တော့ မိုးအောင်ရင် ရဲ့ စကား တစ်ခွန်းကြောင့် ရင်ထဲ ဆို့နင့် အောင် ခံစားရ တယ်လို့ ဆို ထားပါ တယ် ။ မိခင် ဆုံးပါးသွားပြီးနောက် စိတ်ပန်း လူပန်းဖြစ် နေပြီး ကိုဗစ်ကြားမှာ ရိုက်ကူးရေး တွေကြားလုံးပမ်းနေ ချိန်မှာ သားတစ်ယောက် လို ချစ်ခင် ရတဲ့ မိုးအောင်ရင် တစ်ယောက် အသုတ် လာပို့ရာကနေ သားဖြစ်သူ အသုတ် လိုက်ရောင်းနေတဲ့ အတွက် ရင်ထဲ မကောင်းကြောင်းနဲ့ သားရဲ့ စကားကြောင့်ရင်ထဲဆို့ ရပုံကို အခုလိုပဲ ရေးသား ထား ခဲ့တာပဲဖြစ် ပါတယ် ။
” ချစ်ခင် လေးစားတန်ဖိုးထား ရပါသော ပရိသတ်ကြီး နှင့် We Love သဲသဲတုန်လေး တို့ရှင့် မို့ Line ပေါ် မတက်တာကြာတော့ လွမ်းနေကြရောပေါ့ ဒီဇင်ဘာလ လောက် က အံသွားနုတ် ထားရတယ် ပိုးသတ်ဆေးတွေသောက်တော့ နုံးချိနေတာပဲ ပြီးတော့ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုယူပြီး MRTV-4 က ချစ်လှစွာသော ဇာတ်လမ်းတွဲကို ပြန်လည် ရိုက်ကူး နေပါသည်။” ” မိခင်ကလည်းဆုံး သွားကလည်း နုတ်ထားလို့ အားလျှော့နေပြီး Covid ကိုကြောက်ရတာ တစ်မျိုး စိတ်အင်အား ချိနဲ့စွာနဲ့ပဲ ရှူတင်ကို သွားရ ပါတယ်။ ရှူတင်ရောက်တော့လည်း အနုပညာရဲ့ ကုစားမှုကြောင့် သရုပ်ဆောင်မှု ပညာကမနေသာပါဘူး အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေ နားရက် ဆို တော့ အိမ်မှာနားနေတုန်း သားသား Moe Aung Yin က ဖုန်းဆက်လာတယ် ”
“သားသား အသုပ် လာပို့ချင် လို့တဲ့ ( ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးလေးရက် က ဂဏန်း တွေ ပုဇွန်တွေ အများကြီး လာပို့ ထားသေးတယ် ) သူကပြောတယ် သားအသုပ် လိုက်ရောင်းနေ တယ် ရုတ်တရက် ဒီစကားကြား ရတော့ မို့ ရင်ထဲမှာ ဆို့သွားတယ် ။ မိခင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ကိုယ့်သားလေး ကို ဒီလို ဘယ်ရောင်း စေချင်ပါ့မလဲ ။ မို့က မေးလိုက် တယ် သားလေး ကားနဲ့လိုက် ရောင်းတာ မြတ်ရောမြတ် ရဲ့လား သူကပြော တယ် အမေမွှေးရယ် ဘယ်မြတ် ပါ့မလဲ မရှုံးရင်ပြီးရော အမေ မွှေး သားပရိတ်သတ် နဲ့ ထိတွေ့ နေချင်တယ် ။ ( အော် … အမေတူ သားပါလား ) ”
“သူ က Moe’s Favorite Food ဆိုပြီး အသုပ် စုံ ၊ ကြက်ကင်နှင့် ဆန်လုံးညို အုန်းထမင်း ၊ ဆိတ်ကင် နှင့် ဆန်လုံးညို ပဲထမင်း တွေရောင်း နေပါတယ် မို့သားလေး ကို အားပေး ကြပါ ။သူကိုယ် တိုင် လိုက်ပို့ပေး တာပါ စားစရာမှာရင်မင်းသားလေးနဲ့ လည်း ဓါတ်ပုံအတူ တွဲရိုက်လို့ ရတာပေါ့ ။ Covid ကာလမှာ ခန္ဓာ ကိုယ် ဝမှာကြောက်တဲ့ သူတွေ အတွက် ဆန်လုံး ညို စားဖြစ် အောင် သူက စီစဉ် တာပါ ။ သားသား ရောင်း ရပါစေ ။” လို့ ရေးသား ပြီး ပရိသတ်နဲ့ ထိတွေ့နေရတာကို ကြိုက်တဲ့ အမေတူ သားဖြစ်သူ မိုးအောင်ရင် ရဲ့ Moe’s Favourite Food အကြောင်းလေး ကို ပရိသတ်ကို မျှဝေပေးရင်း သူ့ရင်ထဲက ခံစားချက်လေးကို ပြောပြ ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် … .
Previous post အမြိုးသားထုကွီးရဲ့ ရငျကိုဗွောငျးဆနျသှားအောငျ ခန်ဓာကိုယျအလှတရားတှေ ပျေါလှငျပွီး လှလှနျးနတေဲ့ နှယျဒါလီထှနျး
Next post ဖှံ့ထှားလှတဲ့ ခန်ဓာကိုယျအလှလေးကို အထငျးသားပျေါလှငျအောငျပွသထားတဲ့ အေးမွတျသူရဲ့ အမိုကျစား ဗီဒီယိုလေး